In ka badan Boqol qof oo Qaxooti Kale ah ayaa Xagga Badda ka soo Galey Yaman - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Tahriibiyeyaasha dadka ee waqooyiga bari ee Soomaaliya ayaa goor hore oo saakey ah 114 qof xoog uga soo dejiyey dooni yar oo kuwa kaluumeysiga ah iyada oo mareysa meel u dhow tuulada Al Qashaah ee ku taalla xeebta koonfureed ee dalka Yaman. Doonidani waxa ay siddey qaxooti Soomaali ah oo ka soo cararey dagaal, fakhri, iyo cudur. Waxaa ka mid ahaa carruur ay ku jiraan kuwo dhal ah oo aad u yaryar.
Dhammaan dadkii saarnaa doonida ayaa ka badbaadey safarkaa, in kasta oo dhowr qofood ay ku warrameen in tahriibiyeyaashu ay sabarado bir ah ku qaraaceen si ay xoog ugaga soo dejiyaan markii doonidaas oo dad aad uga tiro badan ay saarnaayeen ay u soo dhowaatey xeebta. Nasiib wanaag, waxa ay ku soo degeen meel aan biyaheedu sidaasi mool u ahayn (u gun dheereyn).
Tani waxa ay ahayd doontii lixaad ee Qaxooti Soomaali iyo Muhaajiriin Itoobiyaan ah sidda oo ka timaadda Soomaaliya oo soo gaarta xeebaha Yaman tan iyo Isniintii, ay Disembar 1da ahayd. Dad wadartoodu gaareyso 533 qof ayaa soo degey. Labaatan iyo siddeed qof ayaa dhintey iyaga oo isku dayaya safarka, iyaga oo ama u dhintey qaraacis, neef-qabatin, ama sumoobid, ama iyaga oo biyaha ku qarqamey/maashoodey ka dib markii khasab looga soo dejiyey doonida iyaga oo aad uga fog xeebta.
Si wax loogu qabto dadka maanta yimid, ayaa koox MSF ah oo wareegta ay gargaar caafimaad iyo alaabada gargaarka, oo ay ka mid yihiin biyo, cunto, iyo dhar qallalan ay siiyeen qaxootigaa daalanaa—oo mararka qaarna fuuqbaxsanaa—ee iyaga oo dhowr kooxood ah ku soo ururey qiyaastii meelo qiyaastii 100 mitir isu jira oo waddada weyn hareeraheeda ah. Qaxootiga ayaa xeebta yimid saacaddu markii ay ahayd 12kii saac/6dii subaxnimo, ka dib markii ay safar ku soo jireen 45-saac iyaga oo soo dhex marey Gacanka Cadan kana soo baxay Boosaaso, oo ku taalla gobolka Puntland ee waqooyiga-bari ee Soomaaliya. Ka dibna waa ay soo socdeen dhowrka kiilomitir ee dhulka qorfaha iyo dhagxaanta leh ah. Qaar badani waa ay cago-caddaayeen.
WAREYSI LALA YEESHEY qof qaxooti ah Soomaali ah — 12/04/08
Xarunta Qaabilaadda ee AXWAR
“Waxa aan ku noolaa guri Muqdisho ku yaalla oo cariish ah oo ka sameysan geedo, waxa uu ahaa guri aad u liita. Markii uu dagaalku ka sii darey, anniga iyo qoyskeyga waxa aan ku khasbanaaney in aan bannaanka magaalada u qaxno, halkaas oo dad aad u tiro badan u qaxeen. Qaar hay’adaha ka mid ah ayaa u yimid in ay caawiyaan qaxootiga, laakiin caawimadaasi ma ahayn mid dadka ku filan. Sidaa daraaddeed ayaan u soo baxay si aan qoyskeyga u caawiyo. Hal wiil ayaan leeyahay. Hooyadii ayaana uu la joogaa Muqdisho.
Maalin kasta duqeyn ayaan ku hoos noolnahay. Marka aan gurigeyga ka baxo, ma garanayo in aan nabadqab ku soo noqon doono iyo in aan soo dhimman doono. Dadku waxa ay ku nool yihiin hoy aan ka ilaalineynin roobka iyo busta/carrada. Nolol aad u xun ayaan ku nool nahay.
Intii aan ku soo jirney safarkayagii Muqdisho ilaa Boosaaso ahaa, waxa aan soo marney jidgooyooyin badan, halkaas oo dabley hubeysani ay nagu dhaceen. Boosaaso ayaan joogey siddeed bilood anniga oo xamaalinimo ku shaqeynaya, oo gaari gacmeed riixa. Wax xoogaa lacag ah ayaan heley, laakiin iiguma filneyn safarka doonida. Maalin ayaan konton doollar ka heley dhulka taas ayaana ii sahashey in aan safarkaa soo galo. Nasiib ayaan leeyahay. 80 doollar ayaan ku bixiyey safarka.
Markii aan ka soo degeyney Yaman, mid ka mid ah tahriibiyeyaasha ayaa isku dayey in uu dhammaanteen nagu daadiyo meel badda ah oo gun dheer oo ka fog xeebta. Laakiin tahriibiye kale ayaa yiri “maya, waa in aan u dhoweynaa xeebta.” Dhibaatooyin ayaa ku dhacay dhibanayaasha – dadka waxaa badanaaba waxaa la isaga daadiyaa biyaha – laakiin annaga qofna sidaa kuma dhicin.
“Culays kasta aan qabee, marna ma rajo dhigayo.”
Tags: Bad, Qoxooti, Soomaali, tahriib, xeeb, Yemen